XYZPrinting 3D isithwebuli ukubuyekeza | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Lapho sicabanga ukudala izinto nge-3D, into yokuqala efika engqondweni yabasebenzisi abaningi ukukwazi ukuskena izinto ze-Real World ukuze uzifake ekhompyutheni futhi ukwazi ukwenza ukuhlenga nokulungisa endaweni yedijithali. Kube khona izixazululo ezahlukahlukene emakethe isikhathi eside ukuze zikwazi ukufaka izinto zangempela kwidijithali.
Kulesi senzakalo sizohlaziya imishini enikezwe ngumkhiqizi we-XYZPrinting. a isithwebuli se-3D esiphathwa ngesandla, kulula ukuyisebenzisa nokuthi singakwazi ukuhambisa noma yikuphi.
2 Izici zobuchwepheshe nokucaciswa kweskena se-XYZPrinting 3D
4 Izinhlelo zokusebenza ezisekelwayo, izidingo nokuxhuma
5 Ukufakwa nokuthuma
6 Ikhwalithi yamaskeni atholakele
Kunzima ukusungula ukuqhathanisa kwemikhiqizo ngoba kunabakhiqizi abambalwa kakhulu abake baba nesibindi sokuthengisa okokusebenza nobunzima obunjalo endaweni yasekhaya neyasemsebenzini. Emishinini esiyifakile uma kuqhathaniswa, ezi-2 zazo zenzelwe ukuskena izinto ezisele kwipulatifomu ejikelezayo. Futhi nesithwebuli se-BQ (esike sayihlaziya phambilini) kumisiwe.
Intengo yeskena se-XYZPrinting 3D siyibeka njenge- umkhiqizo oshibhile wokuqhathanisa. Okulandelayo, sizohlola ukuthi ngabe kuyahlangabezana yini nobungcweti okulungiselelwe thina.
Izici zobuchwepheshe nokucaciswa kweskena se-XYZPrinting 3D
Lesi sithwebuli esiphathwayo kusekelwe kubuchwepheshe be-Intel RealSense, lobu buchwepheshe ngokuyisisekelo ihlanganisa ikhamera ye-infrared ukuze ibambe ukujula kwezinto eziskeniwe nekhamera ye-HD ukuze kutholwe ukwakheka. Empeleni, le nqubo iyinkimbinkimbi kakhulu ngoba imishini uqobo ibhekele ukukhipha uhla lwe-infrared lapho ihumusha khona ukubuyela emuva okuthathwe yikhamera ye-infrared futhi ihlanganise iphinde ilungise idatha etholwe nge-algorithm esebenzisa idatha kusuka kulokhu. ikhamera nekhamera ye-HD.
Lobu buchwepheshe bunezinombolo ezingenamkhawulo zezicelo futhi i-XYZPrinting iyisebenzisile ekwakheni imishini encane efake imodeli yekhamera ye-Intel F200. EMpumalanga i-hardware enhle kakhulu umphelezele ngo Kulula kakhulu ukusebenzisa isoftware lokho kuzosivumela ukuthi sithole ngokushesha izinto zedijithali ezithembeke kakhulu kulabo abaskeniwe ku-Real World.
Umenzi wakhe isithwebuli esine- idizayini ekhangayo kakhulu. Ihlanganisa okubomvu okumangazayo negrey opaque ekwakhiweni okuhlanganisiwe nase-ergonomic esingakubamba futhi sikwenze ngesandla esisodwa. Umzimba wesithwebuli ufaka inkinobho ezosivumela ukuthi siqale futhi simise inqubo yokuskena.
Le mininingwane yenzelwe ukuthi singasebenza imishini ngesandla esisodwa, Ukusishiya sikhululekile ukusebenzisa i-PC nokwenza ezinye izinketho njengokulondoloza ukwakheka kwethu nokuphinda ukuskena uma singenelisekanga ngomphumela.
Iskena ixhuma ku-PC ngekhebula cishe Amamitha angu-2. Uma uzoskena usebenzisa i-PC yedeskithophu, ungafuna isandiso ngoba nakanjani kwesinye isikhathi iba mfushane.
Nge ivolumu yokuskena ukuheha phakathi kuka-100x100x200 cm no-5x5x5 cm amathuba angenamkhawulo futhi sizokwazi ukuskena kusuka ezintweni ezincane kuye emisebenzini yobuciko emikhulu.
La ukulungiswa kokujula phakathi kuka-1 no-2,5 ​​mm Kuyasiqinisekisa ukuthi izinto ezifakwe ekhompyutheni zizothembeka kokwasekuqaleni, kepha mhlawumbe le ncazelo ayifanele imikhakha esebenza ngezindawo zomsebenzi lapho ilinganiswa khona ngamamitha amancane noma ngamamilimitha. Ukuze ube nomphumela omuhle isithwebuli kufanele sibe phakathi kuka-10 no-70 cm ukusuka kumodeli okumele iskenwe, kuzofanele sikucabangele lokhu lapho sithwebula izinto ezinkulu kanye nokuba nebanga elanele lentambo ye-USB etholakalayo ukuzungeza into.
Izinhlelo zokusebenza ezisekelwayo, izidingo nokuxhuma
Simangele ukuthi ifuna kangakanani imithombo esidingayo ukuze sikwazi ukusebenzisa imishini. Ngokwethu, asikwazanga ukusebenzisa lesi sithwebuli kukhompyutha eyathengwa ehhovisi eminyakeni emi-3 eyedlule futhi bekufanele sithole iqembu okusha sha kufaka phakathi amachweba we-USB 3.0.
Ngokusho komkhiqizi, imininingwane enconyiwe yile:
IWindows 8.1 / 10 (64-bit)
Iprosesa: I-5th Generation Intel® Core ™ i4 noma eyakamuva
I-8 GB ye-RAM
I-NVIDIA GeForce GTX 750 ti noma ingcono nge-2GB ye-RAM
Noma kunjalo Indlela elula yokubheka ukuthi sinekhompyutha yini ekwazi ukusebenzisa isithwebuli ukusebenzisa i- isofthiwe (kufanele ubhalise ukuyilanda) ukuthi umenzi yenza itholakale kuwo wonke umuntu.
Kokuqukethwe komkhiqizo kunikezwa ikhadi le-SD nesoftware okumele siyifake. Kodwa-ke, sincoma ukuthi ulande inguqulo yakamuva etholakala kuwebhusayithi yomkhiqizi. Ngoba muva nje inketho yokukwazi ukuskena izinto ezinkulu kakhulu ifakiwe.
Inqubo yokufaka ilula kakhulu, qhubeka, ngiyamukela…. sikwazile ukufaka ngaphandle kwenkinga yomshayeli futhi ngaphandle kokulungisa izinketho ezingavamile.
Lapho sesiqale i- isofthiwe okokuqala simangazwa umuzwa wokuba lula kwawo. Kunjalo kakhulu enembile futhi nengane ingayenza isebenze ngaphandle kobunzima obukhulu, ukuchofoza okungu-3 futhi sinento yethu yokuqala eskeniwe.
Ikhwalithi yamaskeni atholakele
Es Kulula kakhulu ukuthola ukuskena okuhle ngoba kusoftware ngaso sonke isikhathi ungabheka isimo lapho inqubo yokuskena ithuthuka futhi ilungise ngesikhathi sangempela uma wenza amaphutha. Yize kuliqiniso ukuthi kuphi umphumela omuhle esiwutholayo lapho kuthwetshulwa izinto ezinkulu kunenkomishi, ngobukhulu obuncane kunzima kuye ukuthi ahumushe idatha.
Lezi ngezinye zezibonelo esiziskene. Kusuka ekhanda lomngane kuya kumazibuthe ambalwa wefriji, ngisho ne-cactus ebhodweni lakho.
Njengesincomo esijwayelekile sizokutshela lokho kufanele uhambise isithwebuli kancane kancane ukunikeza isoftware isikhathi sokucubungula lonke ulwazi olutholayo nokuthi into ezoskenwa kufanele kube kakhulu ukhanyiswe kahle.
Elinye lamaphuzu aphawuleka kakhulu leli qembu elinalo yi Inani elikhulu lentengo. Ngeke sithole umkhiqizo emakethe ohlanganisa lobu buchwepheshe ngenani elilingana neqembu le-XYZPrinting.
Uma sengeza kuleli qiniso umsebenzi omuhle owenziwe ngumenzi ngenkathi edizayina umkhiqizo kanye nempumelelo yokuhambisana ne-hardware nge kulula ukuyisebenzisa isoftware Siphetha ngokuthi lokhu kungenye yezindlela ezingcono kakhulu emakethe ukufinyelela isithwebuli se-3D ngentengo yokonga.
Idizayini elula futhi esebenzayo
Kulula ukusebenzisa isoftware
Intambo emfushane ye-USB
Izidingo zehadiwe eziphakeme kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ukuhlaziywa kweskena se-XYZPrinting 3D scanner